Soo saare Nucleic acid
Qalabka soo saarida otomaatiga ah ee otomaatiga ah wuxuu ku saleysan yahay habka soo saarida otomaatigga ah ee kala soocista xarkaha magnetka, taas oo si fiican uga gudbi karta cilladaha habka soo saarista nukleerka asalka ah, isla markaana xaqiijin kara diyaarinta degdegga ah ee wax ku oolka ah ee 1-96 shaybaarkiiba. Iyada oo u dhiganta reagent soo saarista Nucleic acid, waxay ka baaraandegi kartaa noocyo noocyo muunad ah sida serum, plasma, dhiig dhan, suuf, saxar, nudaha, qaybta paraffin, bakteeriyada, fungi, iwm. Waxaa lagu dabaqi karaa ka hortagga iyo xakamaynta cudurka, karantiil xayawaan, baaritaanka caafimaad, baaritaanka-bixitaanka gelitaanka iyo karantiilka, maamulka cuntada iyo dawada, dawada dambi baarista, barista iyo cilmi baarista sayniska iyo dhinacyada kale.
Waxtarka sare: bar magnetic buuxa iyo ballaadhinta ballaadhinta ballaadhinta ballaadhinta technology, si fudud ula tacaamuli kartaa dhammaan noocyada yar yar oo magnetic kuul, si fudud u gaaro soo saaridda ee nucleic acid aan derbiga sudhan yihiin haraaga ah.
Nabdoonaanta: adeegsiga shaashadda soo saarista hal-mar iyo laambadda nadiifinta ee ultraviolet-ka ayaa ka fogaan kara wasakhda aerosol ee ka timaadda dufcooyin kala duwan waxayna yareyn kartaa halista hawlgalka.
Caqli badan: Naqshadeynta UI-ga gaarka ah ee xakamaynta qolka naqshadeynta UI, waxay noqon kartaa bandhig hal mar ah oo xuduudaha hawlgalka, si fudud loo fahmo loona shaqeeyo
Jaangoyn: barnaamijyo badan oo socda ayaa wax laga beddeli karaa iyadoo loo eegayo baahida, waxayna leedahay kayd weyn oo kayd ah si loo hubiyo midnimada xaaladaha tijaabada ah.
Otomaatiga, wax soosaarka sare: otomaatiga acid soosaarka otomaatiga tijaabada, hal-mar waxsoosaarka shaybaarada 1-96, ka shaqeynta xawaaraha nucleic acid waa 4-5 jeer oo ah soosaarida hal buug
Xirfadlayaal taageeraya reagent: oo leh awood taageero farsamo oo xoog leh, sidaa darteed tijaabooyinka isticmaalaha ayaa noqda mid fudud oo fudud.
Furitaanka Reagent: Marka laga reebo reagent-ka caafimaad ee loo yaqaan 'Corbition medical reagent', wuxuu la tacaali karaa dhammaan noocyada xirmooyinka nadiifinta nukliyeerka kuleylka ee suuqa.
Sooc CBX32 Nucleic Acid Soosaaraha
Awood Muunad 1-32
Muunad Mug ah 50-1000 uL
Waqtiga Soo saarista 30 ~ 60 daqiiqo
Dabool heerka heerkulka 25 ilaa 50 ℃
Nooca Saxanka 96 saxan ceel qoto dheer
Nooca Reagent Madal furan
Heerkulka Hawlgalka CV <= 3%
Maareynta Hawlaha Dhisme cusub, tafatir, tirtir
Nambarka Keydinta Dhismaha dhismaha, 20 ayaa dhigaya tafatirka macaamiisha
Laydhka UV Haa
Cabirka 400 * 420 * 440mm
Koronto AC 110V-240V, 50Hz / 60Hz, 750W
Sooc M33 Soosaarayaasha Nucleic Acid
Awood Muunad 1-33
Xiga: 16 RT-PCR
CBX32 Nucleic Acid Soosaaraha
CBX48 Nucleic Acid Soosaaraha 96 Soo saare Nucleic acid